XOG: Waa Tee Kooxda Ay Ciyaartoydeedu Abid Ugu Akhlaaq Xun Yihiin Horyaalka Premier League? Qiimayn Buuxda Oo Lagu Sameeyay Dhaqanka Ciyaartoyda Kooxaha Ingiriiska. - Gool24.Net
XOG: Waa Tee Kooxda Ay Ciyaartoydeedu Abid Ugu Akhlaaq Xun Yihiin Horyaalka Premier League? Qiimayn Buuxda Oo Lagu Sameeyay Dhaqanka Ciyaartoyda Kooxaha Ingiriiska.
Sinaan ku ciyaarista kubbada cagtu waa mid ka mid ah waxyaabaha ay ciyaartoy badani ixtiraam badan ku helaan halka kuwo kale ay dhaqan xumo iyo ficilo xun xun ay ku abuurtaan nacayn jamaahiirta kubbada cagta aduunka ah.
Haddii aad daawashada kubbada cagta bilawday muddo hore, bal xusuuso Roy Keane iyo Patrick Vieira wixii ay samayn jireen, haddii ay maanta joogi lahaayeen oo la adeegsan lahaa VAR imisa kaadh casaan ayay bishii heli lahaayeen?.
In badan, waxaa qiimayn lagu sameeyaa bandhiga iyo xogta ciyaartoyda si la mid ah kooxaha laakiin inta badan lama sameeyo qiimayn dhinaca akhlaaqda kooxaha iyo ciyaartoyda ah balse mid hadda laga sameeyay horyaalka Premier League ayaa kooxo badan ceeb baday.
Shirkada Transfermarkt ayaa qiimayn buuxda ku samaysay dhaqanka ciyaartoyda Premier League ee tan iyo markii magacan la bixiyay horaantii sagaashamaadkii waxayna qiimayntani ka turjumaysaa dhaqankii ciyaartoyda kooxaha Premier league ee 27 kii sanadood ee ugu danbeeyay.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa qiimaynta lagu sameeyay akhlaaqda ama dhaqanka dhamaan kooxihii Premier league ka soo ciyaaray 27 kii sanadood ee ugu danbeeyay.
Qiimayntan waxaa lagu saleeyay dhamaan kaadhadkii digniinta ahaa iyo kuwii casaanka ahaa ee ay ciyaartoyda Premier League qaateen wixii ka danbeeyay 1992 kii markii magaca Premier League la bixiyay.
FIIRO GAAR AH: Qiimayntan waxaa lagu saleeyay, tirada kaadhadhka digniinta ah, kaadhka digniinta ah+kaadhka cas oo wada socda oo lagu sii daray tirada ciyaartoyda sida tooska ah kaadhka cas loo siiyay.
Kooxda Everton ayaa noqotay kooxda kaalinta kowaad ka gashay xumaanta iyo akhlaaq xumada ciyaartoyda Premier league iyada oo Everton loogu diwaan galiyay kooxda ay ciyaartoydeedu ugu dhaqanka xun yihiin.
Intii uu jiray magaca Premier league ee ka soo bilaabantay 1992 kii waxaa ciyaartoyda kooxda Everton la siiyay 1,520 kaadh oo digniin ah, waxaana sidoo kale ciyaartoyda kooxda Everton la soo siiyay 94 kaadh casaan oo 49 ka mid ah si toos ah loogu taagay.
Waxayna sidaa Everton si rasmi ah ugu noqotay kooxda ay ciyaartoyda kooxdeedu ugu akhlaaqda xun yihiin intii garoonka lagu jiray dhamaan 27 kii sanadood ee ugu danbeeyay, iyada oo xogtan la tixraacayo.
Sida qiimaynta xogta Transfermarkt lagu cadeeyay, kooxda Chelsea ayaa ah kooxda labaad ee ay ciyaartoyda kooxdeedu ugu soo dhaqanka xumeeyeen waxayna ciyaartoyda Blues soo heleen 1,569 kaadh oo digniin ah , waxaana kaadhka cas loo taagay 79 kale iyada oo 42 ka mid ah loo taagay kaadhka cas oo toos ah.
Inkasta oo ciyaartoyda kooxda Chelsea ay ka kaadh digniin badan yihiin kooxda kaalinta kowaad xumaantan ka gashay ee Everton, haddana tirada kaadhadhka cas ee Chelsea ayaa ka hooseeya taas oo kaalinta labaad u riixday.
Laakiin Chelsea waxay halis ugu jirtaa in ay Everton kala wareegto kooxda ay abid ciyaartoyda kooxdeedu ugu dhaqanka xun yihiin Premier League iyada oo farqiga u dhexeeya labada kooxood uu aad u soo yaraanayo.
Kooxda kaalinta saddexaad ku jirtaa waa Arsenal oo ay ciyaartoyda kooxdeedu soo qaateen 1,514 kaadh oo digniin ah intii uu magaca Premier league jiray ee ka soo bilaamaysa 1992 kii waxayna ciyaartoyda Gunners waqtigan la soo kulmeen 88 kaad casaan oo 46 ka mid ah si toos ah loo siiyay.
Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta 6 aad ee kooxaha ay ciyaartoydoodu kaadhadhka ugu badan ka soo qaateen horyaalka Premier league waxaana Red Devils loo diwaan galiyay 1446 kaadh oo digniin ah, 66 kaadh casaan oo 35 ka mid ah si toos ah loo siiyay.
Riix 2 aad si aad u sii akhrisato xogta oo dhan.